I-Pete's Alpine Studio 1 ene-loft - I-Airbnb
I-Pete's Alpine Studio 1 ene-loft
Merrijig, Victoria, i-Australia
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Peter
Isitudiyo esisanda kulungiswa esesitayeleni (esisodwa kwezintathu kuphela) esinendawo yokulala ebanzi, eduze ne-Mount Buller, esakhiwe cishe ngokuphelele ngezinto zokwakha ezenziwe kabusha. Ngokuphelele, lesi situdiyo se-quirky rustic esinovulandi waso wangasese sibheke uMfula iDelatite ngokubukwa kwezintaba ezinhle kanye nezilwane eziningi zasendle. Indawo yokudlela emangalisayo i-BoMa ingamamitha nje ukusuka emnyango.
I-Studio inesitezi esikhulu esingenwa ngezitebhisi zamapulangwe. Phezulu nanku umbhede wosayizi wendlovukazi onethezekile onokubukwa phezulu kwesihlahla kanye nombhede wosuku. Phansi kunendawo yokuhlala, ikhishi nezindawo zokudlela. Kukhona i-LCD TV enkulu ene-DVD player kanye nombhede kasofa onethezekile olala abantu ababili. Ikhishi lifakwe kahle isiqandisi, isitofu sikagesi nama-hotplate kanjalo nemicrowave. Kukhona futhi ipani likagesi kanye nezitsha eziningi zokusika. Kuhlinzekwa itiye/ikhofi/ushukela/ukudla okumnandi. Ebusika iSitudiyo sishisa kamnandi futhi sinezinketho eziningi zokushisisa futhi ehlobo, i-aircon yomjikelezo ongemuva kanye namafeni osilingi kukugcina upholile.
I-balcony inokubukwa komfula iDelatite naseMount Buller. Amachibi angaphambili kwendawo ayikhaya lezinyoni eziningi nama-kangaroo.
Igumbi lokugezela le-rustic liqukethe ishawa, indlu yangasese kanye nobuze. Kukhona nokomisa izinwele.
4.84 · 212 okushiwo abanye
Kunendathane yezinto okumele zenziwe endaweni. Izindawo ezisezintabeni zeMt Buller kanye neMt Stirling zihamba ngemizuzu engama-20 kuphela. Uma uthanda ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukuhamba ehlathini, iwayini elimnandi nokudla kunokuningi ongakujabulela lapha.
Ngihlala kakhulu esizeni ngaphandle kwasebusika lapho ngiphezulu entabeni ngenza engikuthanda kakhulu! Ngihlale kule ndawo iminyaka engaphezu kwengu-20 futhi ngingathanda ukwabelana nawe ngolwazi lwami.
Hlola ezinye izinketho ezise- Merrijig namaphethelo